Welcome to Codka Ahlusunna - codkaahlusunna.com
tajriidusariix li sh khalid macalim
taariikhda islaamka sh yusuf
Dhammaan Kutubta »
Wednesday May 29, 2013 - 17:02:04
Intaa kadib waxaan kitaabkan kaga hadlaynaa fadliga samaynta xuska Mawliidka Rasuulka CSW, waxaanna u daliishanaynaa Kitaabka Ilaahay iyo Sunada Rasuulka CSW, waxaanna u maraynaa dariiqa mustaqiimka ah ee Ilahay uu yiri: ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [ النساء : 59 ]==
Dadka muuminiinta ahow Ilaahay adeeca Rasuulkisa adeeca uulul-amriga idinka midka ah adeeca saxaabiga jaliilka ahaa ee ummadda ugu aqoonta badnaa Tafsiirka quraanka Rasuulkuna ugu duceeyey wuxuu uulul amriga ku fasiray ----
Dadka ahlulcilmiga ah ee fiqhiga u saxibka ah; kuwaasoo ah Imaamyaalka diinta Islaamka xadiis bukhari iyo muslim weriyeen wuxuu Rasuulka CSW ku yiri ---
Qofkii Alle khayr weyn la doono wuxuu siiyaa fiqhiga diinta Islaamka.
Xaqa ayuu fahmaa imaamyaalka xaqana wuu raacaa qofka fiqhiga Ilaahay siiyey, waxaanadna ogaataa in shareecada Islaamku ka kooban tahay Sadex shay kuwaasoo kala ah
1.Allaah oo ah Rabbigii soo dajiyay diinta.
2.Nabi Muxammad oo ah Rasuulkii lagu soo dajiyey,
3.Imaamyaalkii Islaamka oo ah Culumadii diinta ka dhaxashay Rasuulka CSWS.
Rasuulka CSW wuxuu yiri --
Culammadu waa kuwa dhax lay Anbiyda.
Taasi waxaa Ilaahay Dawo kaga Dhigay in Qofkastaaba aanu Diinta Ra’yigiisa Ku fasarin ee la qaato Fahamka Culumada Islaamka oo ah mid maanta aan muran kataag nayn, oo la ururiyay oo hadana la qoray, isla markaana la cadeeyay Darjada Cilmiyeed, Camaleed, Cabsiyeed, Xifdiyeed, ee mid walba Alle siiyay, iyagoo waliba mid waliba midka kale aan waxba ka naaqusayn kuna kordhi nayn.
Sidaa daraadeed Marka Xaqa loo jeedo ee qofku Xaqdoon yahay waa in uu qaato kitaabka iyo Sunaha kuna qaato Fahamka Culmadaa muxaqiqiinta ah, fahmkaasoo dhamaan ururiyay, kulmiyayna Fahamkii Rasuulka CSW, kii Asxaabta, kii Taabiciinta, kii Taabici-Tabiciinta iyo imaamyaalkii ka xanbaaray cilmiga ee Jiilb jiil ka dhaxlayey Ilaa uu Illaahay sida inagu soo gaadh siiyay waqtigan aaan hadda joogno
Qofku raacitaanka imaamyada diida ee yidhaahda daliilka quraanka fahamkayga ayaaan ku qaadayaa, uuna baabi’iyo xurmadii iyo adeecitaankii imaamka diinta Islaamka wuxuu la kulmayaa khasaaro adduun iyo aakhiro sida ay in badan noo caddaysay diinta Islaamku.
Waxa Imaamu Tarmadi laga wariyay inuu Rasuulku(SCW) yidhi “naga mid maaaha Qofkii aan Caalimkeena u aqoonsan Xaqa uu leeyahay”
Adillooyinkan waxay kuu caddaynayaan in Imaamyaalka Islaamku ee sugay fadliga Mawlidka ay xaq u leeyihiin in la raaco laguna adeeco aayadaha quraanka iyo axaadiithta saxiixa ah ee ay u dalishadeen fadliga uu leeyahay samaynta xuska mawlidka Rasuulka CSW. Daliilladaas oo noogu iman doono qaybaha danbe ee kitaabka waxaan u kala qaadaynaa 3-dex qaybood oo kala ah
1-Daliillada qaybaha uu ka koobanyahay khayraatka lagu sameeyo xuska mawlidka rasuulka dhexdiisa.
2-Daliillada ay sida tooska ah culammadu ugu daliishadaan xuska Rasuulka CSW.
3-Daliillada logu jawaabayo Tashwiishka bidcooyinka diida xuska Nabiga CSW.
Waxaanna inshaa’alahu isugu xijin doonnaa sid ay u kala horreeyaan, annagoo u samayn doonnaa gabagabo aan uga hadlayno dersi kooban oo kamid ah siiradii Rasuulkeenna CSW, kaas oo aan looga maarmin in la baro ubadkeenna iyo dadka ay ku yartahay aqoonta taariikh nololeedkii xabiibka Ilaahay Nabiyullaahi Muxammad CSW.
MAXay KA KOOBANTAHAY XAFLADA XUSKA RASUULKU CSW.
Sida ay ogsoonyihiin dadka caqiiddada wanaagsan garashada fiicannna uleh diinta Islaamka, Dhamaan qaybaha ay ka kooban yihiin Xafladaha loo sameeyo Xuska Dhalashada Rasuulka (SCW) waxaa ka mid ah in la aqriyo:
•Siirada Rasuulka CSW.
•Qasiidooyin lagu amaanayo Rasuulka CSW.
•Salliga Rasuulka CSW oo la aqriyo.
•Sadaqa la bixiyo.
•Muujinta Jacaylka iyo wayneynta Rasuulka CSW
•Ka sheeekaynta dhalshadii Rasuulka oo lagu gaaryeelo bishii uu dhashay.
•Mujinta farxadda ku beegandhalashada Rasuulka CSW.
•Macruufka uu la isku faro munkarkana la isaga nahiyo
•Iyo khyaraad badan oo dadka muslimiinta ihi ay ku muujinayaan qadarinta weynaynta iyo jacaylka ay u qabaan Xabiibka suuban CSW.
Haddaba intaa aan soo sheegnay ee uu ka koobanyahay xuska mawlidka Rasuulku SCW keebaan khayr ahayn oo aan daliillo badan ku lahayn Quraanka kariimka, AxaadiithtaRasuulka CSW iyo Ijmaaca imaamyada diinta Islaamka. Mase kulminta la kulmiyey ayaa ka qaaday khayrkii. Waxaan weydiinaynaa kuwa mawlidka diida markii laysku daro 10 shay oo xalaal ah ayey xaraam noqdeen
Saw wax laga xumaado ma aha in manta wax laga sheego ama la yiraahdo maxaa u daliil ah Sadaqada la bixiyo marka Nabiga la xusayo, Ammaanta, Siirada, Salliga, iyo is faridda jacaylka Rasuulka CSW.
Dahammaan arrimahaas ay kulansatay xafladaha loo sameeyo dhalashada Nabigeenna waxay ka mid yihiin khayraadkii uu Ilaahay Quraanlkiisa kariimka ah nagu amray inaan isu kaalmaysano oo aan isku gacan sinno samaynteeda -------
Isu kaalmaysta khayr samaynta iyo lla ka cabsiga, haddaba dhamaan qaybahaa aan soo sheegnay teebaan samaynteedu ahayn alla ka cabsi iyo birrri.
1- SIIRADA RASUULKA OO LA AKHRIYO
Maalmaha lagu jiro xafladaha Xuska dhalashada Rasuulka CSW waxaa la akhriyaa Kitaabka loo yaqaan Mawliidka oo kulmiya kitaabba ay qoreen caalimiin ka mid ah imaamyaalka diinta Islaamka. kitaabkani wuxuu ka waramaa :
•Dhalashadii Rasuulullahi Muxamad (CSW).
• Mucjisooyinkii Ilaahay ka muujiyey Rasuulka CSW yaraan tiisii ilaa waqtigii uu Ilaahay oofsaday xabiibka.
• Qasaa’id lagu amaanayo Rasuulka CSW, Tawsul iyo istigaatho Ilaahay lagu baryayo fadliga Rasuulka CSW.
Waxa cid kasta oo islaam ahi ka dharagsantahay inta Rasuul ee uu illaahay ku xusay Quraanka Kariimka ah dhalashadooda qisooyinkooda iyo Muc jisooyinkii Ilaahay ku soo galadaystay, Sida:
•Dhalashadii illaa Rasuul naimadii Nabiyulaahi Muuse (CS),[suuratul Qisas A7
•Dhalashadii illaa dhimashdii Nabiyulaahi Ciise (CS),[Suuratul maryan A18—21]
Ilaahay isagoo caddaynay qayb ka mid ah faaiidooyinka ku jira ka sheekayntasiirada iyo fadliga Anbiyada wuxuu quraankiisa kariimka ah ku yiri : ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ) Dhamaanwaaxaa aan kaga warnay ee ah wararkii Rususha waxaan ku xasilinynaa warkaa Qalbigaaga”
Waxa kale oo Ilaahay Suuradda usuf ku yiri: لقد كان في قصصهم عرة لأول الألباب
Haddii sidaas Ilaahay ku yiri Nabiyullaahi muxammad CSW maxaad u malaynaysiin baahida aan u qabno in nalookaga sheekeeyo Nabigeenna suuban oo aan dhegaysanno siiradiisa, ammaantiisa iyo mucjisooyinkiisa, waxaa la ogsoonyahay in qof kasta oo qalbi wanaagsan oo yimaada meelaha lagu xusayo Rasuulka CSW uu ka qaadayo maxabbo hor leh, uunu ka baranayo cilmi aanu horey u aqoon oo Nabiga siiradiisa ah, taasina waa mid ay na fartay Shariicada islaamku.
Waxa la ga weriyey Qaar badan oo kamida Asxaabta Rasuulka inay siirada Rasuulka ay Ubadkooda ubari jireen sida Suurad Quraanka ka mid ah, waxay bari jireen Rasuulka CSW Sheekooyinkiisa, wanaaagiisa, sifooyinkiisii fiicnaa, wanaagii Ilaahay uu sii yay iyo qayba badaan oo siiradiisa ah.
© Copy Right Codka Ahlusunna 2012 - 2018 All Rights Reserved Site Designed & Developed by: Ileys Inc.